1.စပါးဆန်ကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများအတွက်သင့်တော်သည်, ဂျုံ, ပြောင်းဖူးနှင့်ပဲစသည်တို့ကို
စပါးမသွားခင် ဆန်စက်,လယ်သမား (သို့) ဆန်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်စပါးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။, ကြိတ်ခွဲနေစဉ်အတွင်းပျက်စီးခြင်းကိုလျှော့ချပြီးကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်စပါးကိုသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်: လှော်နှင့်မျက်နှာပြင်.
လှဲခြင်းသည်မဖြည့်ထားသောအစေ့ကဲ့သို့သောပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အရာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်, ဖွဲ, ပေါင်းပင်အစေ့များနှင့်ကောက်ရိုးများကိုသာအသုံးပြုသည်. ပိုလေးသောပေါင်းပင်အစေ့များကဲ့သို့သောအခြားလေးလံသောအမှုန်များ, အမျိုးအစားများ, ဆန်နှင့်ကျောက်တုံးများပါ ၀ င်နေ ဦး မည်။ ဖန်သားပြင်သည်အစေ့များကဲ့သို့သေးငယ်ပြီးလေးလံသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, sieve.but အားဖြင့်မြေဆီလွှာအမှုန်များနှင့်ကျောက်ခဲကဲ့သို့သောကောက်ရိုးအဖြစ်ကြီးမားသောအညစ်အကြေးအတွက်မကောင်းဘူး, ဖွဲ, နှင့်မဖြည့်အစေ့.
ဗစ်တာအမှတ်တံဆိပ် 5X-50 စပါးသန့်ရှင်းရေးစက်သည်လောင်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်, siving separating. ဤစပါးသန့်ရှင်းစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်စပါးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်,ဂျုံ, ပဲပုပ်,ပြောင်းဖူး,ပြောင်း,စပါးသန့်ရှင်းရေးစက်တွင်မြေပဲသည်စပါးသန့်ရှင်းစက်၏တုန်ခါမှုဆန်သောဆန်ခါကိုမထားပါ, အတူတူစက်လှို, အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းသည်ဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေပါ. စပါး ဆန်ဖျက်ဆီးစက် ကျောက်ခဲတို့ကိုဖယ်ရှားတော်မူ၏, diffferent ဆွဲငင်အားအပေါ် အခြေခံ၍ စပါးမှရွှံ့နှင့်အခြားလေးလံသောအညစ်အကြေးများ ,သောစပါးနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအညစ်အကြေးများအကြားဖြစ်ပါတယ်. စပါးဆန်သန့်ရှင်းရေးစက်သည်အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္havingာန်ရှိသောစပါးစေ့များနှင့်ဖယ်ရှားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်သည်.
1.ဤစပါးဆန်သန့်စင်စက်သည်ကြာရှည်ခံသောဆန်ခါနှင့်လိုက်ဖက်သည်, ၎င်းသည်ကျောက်များပိုမိုများပြားသောကုန်ကြမ်းများနှင့်ပိုမိုသင့်လျော်သည်,ပိုမိုမြင့်မားသောကျောက် - ဖယ်ရှားခြင်းထိရောက်မှု.
3.ပြင်ပပန်ကာဖြင့်,ကောင်းစွာ - တံဆိပ်ခတ်ဆောက်လုပ်ရေး, ဖုန်မှုန့်မပါပါ, ဖုန်မှုန့်နှင့်အလင်းအညစ်အကြေးများကိုလေစုပ်စက်ဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည်.
4.စပါးဆန်သန့်ရှင်းရေးစက်တွင်စက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်သောအညစ်အကြေးများကိုလျော့ရဲသောတားဆီးကာကွယ်သည့်ကိရိယာဖြင့်အသုံးပြုသည်.
5.စပါးဆန်သန့်ရှင်းစက်တွင်ရော်ဘာနှင့်အတူအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်ယန္တရားကိုအသုံးပြုသည်, တုန်ခါမှုနည်းသည်, ဆူညံသံ.
မော်ဒယ် VT5X50 VT5X85 VT5X100 VT5X125
(တစ်တန် / နာရီ)
1~ ၁.၅ 4~ ၅ 6~ ၇ 8~ 9
သန့်ရှင်းရေးနှုန်း ထက်ပိုပြီး 98% ထက်ပိုပြီး 98% ထက်ပိုပြီး 98% ထက်ပိုပြီး 98%